Taasi waa sababta habka Netflix uu ufiican yahay - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Taasi waa sababta habka Netflix uu ufiican yahay - BGR
Taasi waa sababta habka Netflix uu ufiican yahay - BGR
TELES RELAY 8 September 2019
Haddii aad fiiro gaar ah siiso mid ka mid ah cinwaanada Netflix toddobaadkan, waxaa laga yaabaa inaad la kulantay muujinta - oo ay ka mid yihiin - in Netflix ay tijaabineyso jadwal warbaahin ka duwan oo loogu talagalay xilliyada TV cusub. Nooca gaaban ee waxa socda: Kuwani waa xaqiiqooyin muujinaya sida Bandhigii Bakeeriga ee Boqortooyada Ingiriiska kuwaas oo lagu sii daayay Netflix oo aan halkan kaga hadlayno, kuwaas oo u dhowaa in la kala firdhiyo si dadka looga dhigo kuwo isku mashquulsan toddobaadkan
Si kastaba ha noqotee, Netflix waa xoogga noocaan ah ee warbaahinta iyo madadaalada taas oo ku saabsan wax kasta oo ay sameyso waa la baarayaa, laga doodi karaa, la amaanayaa, la dhaleeceynayaa - oo si sax ah ayaa la yiraahdaa. Nasiib wanaag, durduriyaha ayaa u jawaabay Toddobaadkan oo, marka laga reebo arrimo yar mooyee, ma qorsheynayo inuu dib ugu laabto jadwalka warbaahintiisa hal mar, si ka duwan qaar ka mid ah kuwa ay xafiiltamaan mustaqbalka, taasoo u badan tahay qaab ka dhib badan.
Netflix ay xafiiltamaan Apple iyo Disney (Apple TV + iyo Disney +) waa in la soo bandhigo bisha Nofembar waxayna ku tiirsanaan doonaan jadwal todobaadle ah oo ka hadlaya waxyaabaha telefishanka asalka u ah ee labada adeegba. Kuwaasoo, indhaha hore, xitaa laga yaabo inay macno ugu yeeshaan qaar idinka mid ah. Gaar ahaan Disney, oo horeyba u ogaa inuu haysto raashin badan oo ka kooban waxyaabo uu si fiican u yaqaan - sidaas darteedna uu kugu qoslo adoo is qoraaya kadibna ku qasbaya inaad isbuuc usbuuc ka dib loo arko inuu yahay istiraatiijiyad dagaal oo ka dhan ah Netflix . Midda labaad, waxay u badan tahay in kordhinta jadwalka sii deynta ay sidoo kale kordhin karto daaqadda waqtiga ay dadku ka hadlayaan taxanaha.
Laakiin, sida laga soo xigtay Netflix, oo sannado badan baranayay arrintan, taasi maahan sida aad u qanciso macaamiisha. 19659002] Daawasho laga yaabee in laga yaabo in lagu qabto show iyada oo la daawanayo duuliyaha, laakiin taasi inta badan maahan kiiska, marka loo eego cilmi-baaristii duuliyaha. Xaqiiqdii, Netflix ayaa fahmay tan shan sano ka hor, taas oo ku saleysan daraasad ku saabsan arrimo ka badan arrimaha 20 ee suuqyada 16, oo aad ku daawan karto natiijooyinka oo dhan. halkan .
Isha Sawirka: Sawirka Nicole Wilder / AMC / Sony / Kobal / Shutterstock
Si loo tilmaamo hal tusaale: sida ku cad natiijooyinka, Netflix waxay go'aamisay inay guud ahaan qaadatay afar qaybood oo ah . ] Wanaagsan wac Saa'ee ka hor intaadan qabatimin goob-wareega breaking Bad . waayo, Niman waalan kaas oo ah gubasho aad u gaabis ah, xogta Netflix waxay muujineysaa inay qaadatay lix qaybood. waayo, Sideen ula kulmay hooyadi waxay qaadatay 8.
Dhacdooyinkan waa waqtiga marka 70% daawadayaasha ay dhammeeyaan ugu yaraan isla xilli isku mid ah iyo hal xilli kale oo dheeri ah. "Daraasaddeena ku aaddan war baahinta badan ee 20 ee suuqyada 16," ayuu yiri waqtigii maamulaha content Netflix, Ted Sarandos, "waxaan ogaanay in qofna waligiis uusan ku xirneyn darawalka. Tani waxay na siineysaa kalsooni ah inaan siino xubnaheena marwalba waqti kastaa ay la jaan qaadayaan habka taageerayaasha loo sameeyo. "
Waxaa jira qaar ka mid ah godad muhiim ah oo ku saabsan tijaabadan dabeecadda daawadayaasha. Waxa la cabiray waa dabeecadda daawadayaasha marka la barbar dhigo xilliyada buuxa ee waxyaabaha la heli karo oo diyaar u ah inay ku soo biiraan Netflix. Waxa ugu badan ee ay Netflix faafisay oo ay kicisay dadka markii ugu horreysay, taasoo ka fogaynaysa telefishanka tooska ah ballanta.
Qaar ka mid ah daawadayaasha ayaa laga yaabaa inay, si uun, dib ugu laabtaan qaab dhismeedkooda iyadoo loo eegayo waxyaabaha laga filayo. markay la macaamilaan show muujinaya oo keliya helitaan toddobaadle ah. Ka dibna waxaa jira xaqiiqda ah in adeegyada sida Hulu ay horay dadka uga dhigeen inay isticmaalaan jadwalka daabacaadda toddobaadlaha oo gaabis ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan tuhunsanahay in dadkani ay ka tirsan yihiin dadka laga tirada badan yahay - tanina waxay si dhab ah u horjoogsanaysaa dadaalka telefishanka Apple, oo ay ku jiraan inta badan mashruucyo cusub, marka la barbar dhigo Disney, oo bixiya ugu yaraan barnaamijyo badan oo ku saleysan magacyada horeba. yaqaan iyo mahadnaqay dhammaan. sida Star Wars .
Waxay la mid tahay safkan weyn ee Wire The "Haddii aad u timaadid Boqorka, waxba uma dhimi doontid. isla dagaal oo hal gacan dhabarka lagu xidho. Wax ka qabashada Netflix ee leh jadwalka sii deynta toddobaadlaha waxay umuuqataa wax sidaas oo kale.
Source Source: Valentin Wolf / imageBROKER / Shutterstock
Wiilasha xun ee nolosha, shimbiraha ugaarsada, Jojo Rabbit iyo inbadan - BGR
Dhammaan cusub ee Netflix toddobaadkan iyo wax kasta oo kale (Sebtember 8 toddobaad) - BGR
Inde: La diaspora indienne, qui compte 17,5 millions d’habitants, reste la plus grande du monde | Inde Nouvelles
Paris Saint-Germain vs Real Madrid - Daqiiqadaha Ciyaaraha Kubadda Cagta - 18 Sebtember 2019 - ESPN
Muusiga: Safarel Obiang ayaa la xiray ... (+ video)
Facebook wuxuu bilaabay gudi cusub oo madax banaan oo kormeer ah - VIDEO
Haddii aadan weli goyn xadhkaha, sahankan ayaa kaa dhigi kara inaad maskaxdaada beddesho - BGR
Cameroon - Job Offers231
DADKA & LIFESTYLE4,636
TECH & TELECOM2,081